Athy - N'ime obodo
Athy bụ otu n'ime obodo ihe nketa abụọ dị na Kildare wee ghọọ obodo ahịa n'ihi ọwa mmiri na netwọk mmiri - ọ bụ ebe a ka Osimiri Barrow na-ezute alaka Athy nke Grand Canal. A maara Athy n'ụwa niile maka ịnabata ụlọ akwụkwọ mgbụsị akwụkwọ Shackleton n'ịsọpụrụ nnukwu onye nyocha, Ernest Shackleton, onye amụrụ na Kilkea dị nso na n'ezie ọ bụ ebe naanị ihe ngosi na-adịgide adịgide raara nye onye nyocha. Chọpụta akụkọ ihe mere eme nke ndị Quakers na Kildare na nleta Ballitore na Burtown House & Gardens, ma ọ bụ mee njem ụgbọ mmiri n'akụkụ Osimiri ka ịhụ obodo ahụ site n'akụkụ dị iche. Chọgharịa saịtị ihe nketa oge ochie fesa na mpaghara ahụ dịka Kilkea Castle na Whites Castle, nke sitere n'oge Normans na Fitzgeralds (Earls nke Kildare), ebe 12th narị afọ Moate nke Ardscull bụ aha ọjọọ maka akụkọ mgbe ochie nke "obere mmadụ".
Ebe nlegharị anya kacha mma na Athy
Nnukwu ihe iri ga -eme gburugburu Athy
Akụkọ sitere na Waterways: Athy Boat Tours
Kedu ihe Shackleton Ga-eme?
Akụkọ banyere ntachi obi & ọdachi
Chọpụta ihe ndị ọzọ na Athy
Cafés okirikiriPubs & Ndụ abalịỤlọ ahịa Gastro-PubBed & BreakfastEzigbo ezinụlọ
Arts & OmenalaCafés okirikiri
Bed & BreakfastEzigbo ezinụlọ
OutdoorsUseslọ & Ubiụlọ oriri na ọṅụṅụ
Pubs & Ndụ abalịNri oriri